April 2013 ~ Htet Aung Kyaw
1:11 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
(မင်းသမီးစခန်းအပါဝင် တခြားစခန်းအသီးသီးကလဲ ဒီလိုမှတ်တန်းတင်ထားနိုင်ရင်ကောင်းမယ်)
3:28 PM Htet Aung Kyaw 1 comment
ထက်အောင်ကျော်| April 6, 2013 | ဧရာဝတီ။
နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ရဲ့ အပြင်ဘက်နားရှိ မြန်မာ စာသင်ကျောင်းလေးဆီ ကျနော် ရောက်သွားတာ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၀န်းကျင် ရှိနေပါပြီ။ အော်စလိုနဲ့ လီလယ်စတိုး (Lillestrøm) မြို့ကြား ကားလမ်းဘေးက ကျောက်တောင် တလုံးရဲ့ လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာ ဒီလို စာသင်ခန်းတွေ၊ အားကစားကွင်း တွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားတော့ ကျောင်းနေရာကို အတော်ရှာယူ ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကျောင်းကို တပတ်မှာ တနင်္ဂနွေတရက်သာ ဖွင့်ပြီး တရက်မှာ ၃ နာရီလောက်သာ စာသင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(အော်စလို မြန်မာကျောင်းက ကလေးငယ်တချို့ နှစ်သစ်ကူးပွဲမှာ သီချင်းဆိုနေစဉ်- ဓာတ်ပုံ- ထက်အောင်ကျော်)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သင်္ကြန်အကြိုကာလဖြစ်လို့ ပူပြင်းတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ ကလေးတွေ ရေကစားဖို့ပြင် နေကြပေမယ့် ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ ကလေးတွေကတော့ အနွေးထည် ထူထူတွေ၊ နှင်းကာ အင်္ကျီတွေ ၀တ်လို့။ သူငယ်တန်း ဖတ်စာထဲက သင်ခန်းစာတခုကို ဆရာမ ဖတ်ပြတဲ့အတိုင်း သူတို့ လိုက်ဆိုနေကြပေမယ့် ဘာအဓိပ္ပာယ်မှန်း သူတို့ နားလည်ပုံ မရ။
Hva er Ze-thi? (ဆီးသီးဆိုတာ ဘာလဲ ဆရာမ) ဆိုပြီး အသက် ၆ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေးတဦးက ဆရာမကို နော်ဝေးတ၀က် မြန်မာတ၀က်နဲ့ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ “ဆီးသီးဆိုတာ ဒီမှာမရှိဘူး သမီးရဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံ အညာ ဒေသမှာပဲ ဆီးပင်က ပေါက်တာ” ဆိုပြီး ဆရာမက ဖြေပါတယ်။ “အညာဆိုတာ ဘာလဲ ဆရာမ” လို့ နောက်ကလေးတဦးက ထပ်မေးပါတယ်။ “အညာဆိုတာ ဒီမှာလို နှင်းတွေကျပြီး ရေတွေ ခဲမနေတဲ့ နေရာ၊ ပူအိုက်တဲ့ နေရာပေါ့ သားရယ်” လို့ ဆရာမက ရှင်းပြနေပါတယ်။
အပူချိန် အနုတ် ၁၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် လောက်ရှိပြီး ၀န်းကျင်တခုလုံး ဆီးနှင်းတွေ၊ ရေခဲတွေဖုံးလွှမ်း နေတဲ့အရပ်က ကျောင်းလေးမှာ ရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ အညာဒေသနဲ့ အဲဒီ ဒေသမှာ ပေါက်တဲ့ ဆီးသီးအကြောင်း ရှင်းပြရတာ သိပ်လွယ်ပုံ မရ။ တနည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဆီးသီး မရှိ၊ ပန်းသီးသာ ရှိတဲ့အရပ်၊ ထန်းလျက်ခဲ မရှိ၊ ချောကလက်ခဲသာ ရှိတဲ့အရပ်မှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးတွေကို မြန်မာစာနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အကြောင်း သင်ကြားရေး ဆိုတာဟာ သိပ်မလွယ်လှ။
ဒီလို မလွယ်တဲ့ အခြေနေကြားထဲကနေ ကျောင်းသား မိဘတစု ကြိုးစား ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဒီကျောင်းမှာ ကျောင်းသား ၁၆ ဦး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ရောက်သွားတဲ့ နေ့ကတော့ ၈ ဦး ပဲ တွေ့ရပြီး ကလေးတွေ နေမကောင်းတာ၊ သူတို့ မိဘတွေ မအားတာကြောင့် ဒီနေ့ ပျက်ကွက်စာရင်း များနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျောင်းဆရာမ လည်းဖြစ်၊ ကျောင်းသား မိဘလည်း ဖြစ်တဲ့ တောခိုကျောင်းသူဟောင်းတဦးက ပြောပြပါတယ်။
“ဒီမှာ တသက်လုံး နေမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာစကား၊ မြန်မာစာ မတတ်လည်း အထွေအထူးတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်ကိုပဲ ပြန်ပြန်၊ မိဘတွေနဲ့ပဲ စကားပြောပြော မြန်မာလို ပြောတတ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့” လို့ ဆရာမက ရှင်းပြပါတယ်။
ကလေးတွေနဲ့ ကျနော် စကားပြောကြည့်တော့ သူတို့ ပြောတဲ့ မြန်မာစကားက တမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူကြီးတွေ နော်ဝေစကား ပြောတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ မပီမသဖြစ်နေတဲ့ အသံလိုမျိုး သူတို့ရဲ့ မြန်မာစကား ဟာလည်း နော်ဝေအသံ ၀ဲနေတဲ့ မြန်မာစကား ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျနော့်စိတ်ထဲ ခံစားမိပါတယ်။ ဒီ ကလေးငယ်တွေထဲက တချို့ဟာ နယ်စပ်က ကျောင်းသား စခန်းတွေ၊ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ မွေးခဲ့ပေမယ့် အများစုက ဒီနော်ဝေကို ရောက်ပြီးမှ မွေးဖွားတာ ဖြစ်လို့ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားဟာ သူတို့အတွက် သူစိမ်း ဖြစ်နေပုံ ရပါတယ်။
“အရင်ကတော့ မြန်မာပြည် ပြန်ရေးဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်မှု သက်သက်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ သမ္မတ ကိုယ်တိုင်ရော၊ ဒေါ်စုရော၊ မင်းကိုနိုင်ရော နော်ဝေအထိ ရောက်လာပြီး ပြန်လာနိုင်ပြီလို့ ဖိတ်ခေါ်နေပြီဆိုတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်က သိပ်မဝေးတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်” လို့ ကျောင်းသားမိဘတဦးက သူ့ကလေးရဲ့ လက်ကိုဆွဲရင်း ပြောပါတယ်။
ဒီကျောင်းရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက မူလတန်းကျောင်းလို ကျောင်းသားနဲ့ ကျောင်းဆရာချည်း ရှိတဲ့ ကျောင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသားမိဘတွေပါ လိုက်လာရပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာစာ၊ မြန်မာ စကား သင်ကြားရေး အရေးကြီးပုံနဲ့ မိဘတွေက ကလေးတွေအပေါ် ဘယ်လောက် အလေးထားသလဲ ဆိုတာကို နားလည်စေဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ကျောင်းကော်မီတီဝင် တဦးက ပြောပါတယ်။
(အ်ာစလို မြန်မာကျောင်း သက်ငယ်တန်း- ဓာတ်ပုံ- ထက်အောင်ကျော်)
“ဒီလိုဗျ …။ ကျနော်တို့ အချင်းချင်းတွေ့လို့ စကားပြောဖြစ်ရင် အကြီးကြီးတွေပဲ ပြောဖြစ်ကြတာ များတယ်လေဗျာ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ရေးလိုဟာမျိုးကို တနေကုန် ငြင်းရင်ငြင်းနေမယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ကိုယ့်ကလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာစကားတောင် မပြောတတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူးလေ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“အဲတော့ အကြီးကြီးတွေကိုလည်း ပြောပါ။ သေးလေးတွေထဲက ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ ကိုယ်လည်း ချက်ချင်း ထလုပ်ပါ” လို့ ကျောင်းကော်မတီဝင် လည်းဖြစ်၊ ကျောင်းဆရာနဲ့ ကျောင်းသားမိဘလည်းဖြစ်တဲ့ အသက် ၅၀ ၀န်းကျင် အရွယ် တောခို ကျောင်းသားဟောင်းက ရှင်းပြပါတယ်။
နော်ဝေနိုင်ငံဆီ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ထောင်နဲ့ချီ ပြီးရောက်လာတာ ၁၀ နှစ်ကျော်နေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီလို မြန်မာစာ သင်ပေးတဲ့ ကျောင်းလေးတခု ပေါ်လာတာကတော့ တနှစ်ကျော်ကျော်လေးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အရင်ကတော့ ကလေးတွေကို နီးစပ်ရာ အိမ်တလုံးမှာ စုပြီး မိဘတွေက ၀ိုင်းသင်ပေးလေ့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် ကလေးအများစုကတော့ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဘုရားကျောင်းမှာ ဆုံလေ့ရှိပြီး မိဘတွေက သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစု ဘာသာစကားတွေကို သင်ပေးလေ့ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော် တွေ့ဖူးတဲ့ ကလေးအတော်များများဟာ မြန်မာစကား (လူမျိုးစုဝင် ဆိုရင်လည်း လူမျိုးအလိုက် ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း၊ မွန် စသဖြင့်) ကို အနည်းအကျဉ်း ပြောတတ်ပြီး အနည်းအကျဉ်း နားလည်ကြပေမယ့် စာတော့ မဖတ်တတ်ကြပါ။
တကယ်တော့ ဒီလိုဖြစ်နေတာ နော်ဝေ တနိုင်ငံတည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ကနေ အခြေချ ရောက်လာသူ ဦးရေ ဒီ့ထက် ပိုများတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ သြစတေးလျမှာလည်း မြန်မာစာ သင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်း စနစ်တကျ မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ နောက်တခါ ကလေးတွေကလည်း မြန်မာစာသင်ရမှာကို စိတ်မ၀င်စား၊ လူကြီးတွေကလည်း ကလေးအခွင့်ရေး ချိုးဖောက်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရမှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် အတင်း မတိုက်တွန်းချင်တာနဲ့ ကလေးအများစုဟာ မြန်မာစာ မတတ်ကြဘူးလို့ ကျနော် မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား မိဘတဖြစ်လဲ တောခို ကျောင်းသားဟောင်းတွေက ပြောကြပါတယ်။
(အော်စလို မြန်မာကျောင်း သူငယ်တန်း ဓာတ်ပုံ- ထက်အောင်ကျော်)
“မြန်မာပြည် ပြန်ရင်တော့ မြန်မာစာတတ်ဖို့ အရေးကြီးတာပေါ့လေ။ ကျနော့် ကလေး ၄ ယောက်စလုံး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အပတ်စဉ်သွားပြီး သင်နေပါတယ်” လို့ မြန်မာ အများဆုံး နေထိုင်တဲ့မြို့လို့ လူသိများတဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အင်ဒီယားနား ပြည်နယ် ဖို့ဒ်ဝိန်းမြို့မှ ကျောင်းသား မိဘတဦးက ပြောပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင် ဦးစီး သင်ကြားပေးနေပြီး တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း ၄ နာရီလောက် သင်ကြားပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာတွေ ဒုတိယ အများဆုံး အခြေချတဲ့ နိုင်ငံလို့ ပြောကြတဲ့ သြစတေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့မှာလည်း တနင်္ဂနွေ စာသင်ကျောင်းရှိပြီး မနက် ၉ နာရီ ကနေ ၁၂ နာရီအထိ သင်ပေးတယ်လို့ ကျောင်းသား မိဘတဖြစ်လဲ တောခိုကျောင်းသူဟောင်းတဦးက ပြောပါတယ်။
“ဒါပေမယ့် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မိဘတွေက ကလေးကို ပုံမှန် ကျောင်းမပို့နိုင်သလို အိမ်မှာလည်း မသင်ပေးဖြစ်တာ များတယ်” လို့ နယ်စပ်မှာ ကျောင်းဆရာမ လုပ်ဖူးတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူတဦးက ပြောပါတယ်။
“မြန်မာစာ တတ်ဖို့ အရေးကြီးလား ဆိုတော့ မိဘတွေအတွက်တော့ ကိုယ့်မျိုးဆက်က ကိုယ့်မိခင် ဘာသာ စာပေ တတ်ဖို့ အရေးမကြီးဘဲ နေပါ့မလား။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေက မြန်မာစာဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ မယူဆကြဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံမှ ကလေးနှစ်ယောက် ဖခင်၊ တောခိုကျောင်းသားဟောင်း တဦးရဲ့ အဖြေကလည်း အလားတူ ခပ်ဆင်ပါပဲ။ “အစကတော့ မြန်မာစာ သင်တဲ့ကျောင်း ဒီမှာလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု မရှိတော့ဘူး။ ကလေးတွေ စိတ်မ၀င်စားကြလို့။ ကျနော့် ကလေးတွေဆို မြန်မာစကားရော၊ စာပါ မတတ်ကြဘူး။ အိမ်မှာ မြန်မာ စကားပြောပေမဲ့ သူတို့ မပြောချင်ဘူး ဆိုတာနဲ့ ကျနော်လည်း လက်လျော့လိုက်ပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော် ရောက်ဖူးသလောက် ဥရောပ နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ နော်ဝေအပြင် ဒိန်းမတ်နဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံတွေမှာလည်း တနင်္ဂနွေ စာသင်ကျောင်းတွေရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ Bramining မြို့က ကျောင်းလေးဟာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ရပ်နားလိုက်ရပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံ Kuopio မြို့က “မစုစုနွေးကျောင်း” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ တနင်္ဂနွေ ကျောင်းကတော့ တွေ့ဖူးသလောက် မြန်မာကျောင်းတွေထဲမှာ စနစ်အကျဆုံး ဖြစ်ပြီး အခုချိန်ထိ ပုံမှန် လည်ပတ်နေဆဲလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းမှာ သူငယ်တန်းကနေ စတုတ္ထတန်းအထိ ဆရာအင်အား များစွာနဲ့ အသေအချာ သင်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
၈၈ အရေးတော်ပုံ နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးအခြေနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် တောခိုကျောင်းသား ဘ၀ကနေ တတိယ နိုင်ငံဆီ ရောက်လာသူ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ်ကနေ ရောက်လာသူ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စခန်းတွေဆီကနေ တဆင့် ရောက်လာတဲ့ အခြေချ လူဦးရေဟာ သိပ်မနည်းလှ။ အတိအကျ စာရင်းပြုစု ထုတ်ပြန်ထားတာ မတွေ့ရသေးပေမယ့် လေ့လာသူတွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက် အရ ၁ သိန်း နီးပါးအထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ တသိန်းဝန်းကျင်ထဲမှာ ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးငယ်ဦးရေ ဘယ်လောက်အထိ ရှိနေမလဲ။ သောင်းဂဏန်း မရှိရင်တောင် ထောင်ဂဏန်းမက ရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဝေးနေလို့ မြန်မာစာတတ်ဖို့ မလိုတော့ဘူးလား။
“ခက်တာက ဒီက အခြေအနေက ထိုင်းနယ်စပ်က အခြေနေနဲ့ မတူတော့ပြန်ဘူးဗျ။ ဟိုမှာက ထိုင်းကျောင်းဆီ တက်ခွင့်မရလို့ မြန်မာကျောင်းတွေ ထောင်ရတာ။ ဒီမှာက နော်ဝေကျောင်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံထက် အများကြီး သာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီက ကလေးတွေ မြန်မာစာ သင်တယ်ဆိုတာဟာ စာတတ်ဖို့ သက်သက် မဟုတ်တော့ဘူး။ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ National Identity အတွက် ဖြစ်တယ်” လို့ အော်စလို မြန်မာကျောင်း ကော်မတီဝင်က ထောက်ပြပါတယ်။
ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြားမှာ မြန်မာစာသင်ဖို့၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း သင်ကြားဖို့ အခုလို အခက်ခဲတွေ၊ အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ တခြားနိုင်ငံကနေ အခြေချလာကြတဲ့၊ ဥပမာ သိရီလင်္ကာက တမီလ်တို့၊ ကျနော်တို့ အိမ်နီးချင်း ဗီယက်နမ်တို့၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာဖရိကဖက်က လူမျိုးစုတွေ အားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ မိခင် ဘာသာစကားနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု မပျောက်ပျက်အောင် အစီအစဉ်တကျ ဆောင်ရွက်နေတာ အားရစရာကြီး တွေ့ရတယ်လို့လည်း သူက နှိုင်းယှဉ်ပြီ်း ငြီးတွားသွားပါတယ်။
7:08 AM Htet Aung Kyaw No comments
Dawei-1 06-04-13 by Htet Aung Kyaw
Dawei2 06-04-13 by Htet Aung Kyaw
Myanmar's fragile peace - 101 East - Al Jazeera English
3:15 AM Htet Aung Kyaw No comments
101 East Last Modified: 05 Apr 2013 13:43
Myanmar,adiverse country of over 55 million people has enteredanew era of unprecedented democratic reform after decades of military rule.
The success of the country’s transition hinges on peace negotiations with multiple armed ethnic groups.
These minorities represent more than one-third of the population in the resource-rich borderlands of the country. In the past year, ceasefire agreements have been signed with 13 rebel armies, but one conflict in Kachin state remains the key stumbling block.
Chief peace negotiator U Aung Min has given 101 East exclusive access to the latest round of negotiations with the Kachin, as he navigates the tricky path to peace.
Balancing the interests of armed rebels, the Myanmar army and the country’s powerful neighbour, China, is no easy task. Many speculate that the reason for the ongoing fighting lies in control of the resources in Kachin state.
Aung Min has drafted an unlikely band of former exiles and rebel fighters onto his team.
They work tirelessly, often unpaid, to help Myanmar at this critical moment in its history. Min Zaw Oo wasastudent fighter who battled the military in the jungle and is now one of Aung Min’s closes advisors at the Myanmar Peace Center.
International help has been forthcoming, too. Charles Petrie, former head of the UN in Myanmar, was expelled by the former regime and is now back to help ensure the ceasefires hold. Working with the Norwegian-funded Myanmar Peace Support Initiative, his team supports people in some of the country’s most remote locations. Many are only just being coaxed out of hiding after decades on the run.
Mistrust runs deep and key stumbling blocks in the peace process remain. Ethnic leaders want to begin talks on power sharing and running their own affairs. But it is unclear if support exists for constitutional change from the 25 percent military block in Myanmar’s parliament. Ethnic armies, meanwhile, are refusing to give up their guns.
2:53 AM Htet Aung Kyaw No comments
Copy from http://yanawa.blogspot.no/2013/03/books-from-and-about-burma.html
A beautiful poem about returning home. It was publishedafew months after Maung Aung Pwint was released from jail, serving more than6years in Insein and Tharawaddy (also Thayawaddy) prison asapolitical prisoner.
When he would make
an angel of the devil is back home,
from the bread the bread knife to the big chopper
all get shrpened
an angel of the devil
the rose apple tree in front of the house
looks more luxuriant than ever,
all birds sing, enjoying nectar,
the purple sun bird couple
with their needle-thin beaks
flit at play.
more orchids bloom,
the soap acacia tree puts on more new leaves,
garden crotons look more fresh,
the lemon tree in the corner
sags with fruit,
neighbours come inacrowd;
one carryingafour-month-old says:
"This baby has such magnetic power
his granddad is back home."
Well if babies all over the land
showed such power all at once
it would be suchablessed day,
Before he published this poem Maung Aung Pwint spent more than6years in prison from 1999 - 2005
The flute is silent,
the cowherd's shadow -
No light on the other bank
Ma Ka Toe's house -
The dog Velvet
the blue colour overwhelms.
gazes and yearns.
Maung Aung Pwint was born 11. November 1946 in the small village Hpayakon in Burma. He published his first poem in 1968 and his first book "Forest of Sadness Trees" in 1972.
He worked as school teacher, proof-reader, used book dealer, news monitoring editor andavideo programme writer. In 2002 he received the Helmann-Hammett Grants Award by Human Rights Watch and in 2004 theInternational Press Freedom Award by the Committee to Protect Journalists.
For his political beliefs he was imprisoned for several times: Pathein Prison (1967-68), Insein Prison (1978-80), Tant-U police lock-up (1997) and Insein and Tharawaddy prison (1999-2005).
(source: book cover from "The Contents ofaLife")
Article on Maung Aung Pwint:
Maung Aung Pwint - The peoples poet
Copyright: no information
This book contains mainlyavast collection of interviews and statements by witnesses, former political prisoners and victims of torture. It provides also information and facts about the prisons, torturers and treatments and "interrogation methods".
Why am I suggesting this documentation of 2005 about prison conditions and torture in Burmese prisons? So much has happened in the meantime. There is this new "civilian" and "democratically" elected government ("only" 25% of all seats in the parliament are reserved for unelected military officers and many elected members of the ruling party USDP are former officers of the Burmese army). The whole world celebrates the new wonderful and golden era in Myanmar. Everything is fine and beautyful,anew garden Eden on earth when it comes to certain journalists, foreign official representatives and governments. Myanmar's President Thein Sein even has reportedly been tipped for the Nobel Peace Prize in 2012.
But STOP! What about the hundreds of thousands of victims who suffered during the brutal dictatorship from mass rape, torture, forced labour, lootings, abductions and imprisonments, murder and war crimes? Shall all the perpetrators escape unpunished?
Are they really democrats now and changed their methods of ruling the country just because they switched their uniforms for civil suits?
Already bloggers are declared traitors or criminals again for criticising the government, and political prisoners are only released and dissidents/refugees are only allowed to return home when they assure that they won't enter politics and refrain themselves from making political statements and/or criticising the government. The war against the Kachin ethnic minority is still going on. Also, we should not forget the atrocities in Rakhine State. For ethnic conflicts see also the book/report number five at the end of this post: Deciphering Myanmar's Peace Process.
I choose this book because it gives an impression about what happened inside Myanmar's prisons, what the junta, it's helpers and supporters did to their people (many of them still remain in office and/or hold the power in the "New Myanmar") and how many victims are struggling to go on with their daily lifes.
There will be no reconciliation without justice for the victims.
(chapter III, Torture Methods in ..., physical tortue, page 30)
...One man explains his experience:
"After being relocated to the dog cell, I was taken out of the cell with other
prisoners and made to run, shackled and blindfolded, under the noonday
sun for 5-7 minutes, with authorities forcing us to run as fast as possible.
This lastet for three days each afternoon, and was overseen by the jailer
Thein Myint. Finally, we were taken back to the cells, where the door was
opend and we were kicked inside. Only then we were able to remove our
blindfolds. We remained shackled."...
(chapter V, Prison Health Care System, Medications, page 75 and 76)
...While the International Committee of the Red Cross (ICRC) has provided the prisons with several quality medications, political prisoners rarely ever benfit, as many note that the authorities sell the medications on the market or to the political prisoners themselves:
"The ICRC visited Mandalay prison three times while I was there. During
these times, conditions did improve toacertain extent. However, we found
out that though the ICRC had donated much medicine to the prisoners, the
authorities kept it to themselves to sell while giving the prisoners poorer
(chapter VI, The Future For Former Political Prisoners, Families Of Political Prisoners, page 98)
..."After my release, I had to write reports daily to MI officers in order to keep
myself and my home safe. I had to record everyone who visited the house and
what we discussed. This was mental torture. The MI knew that I was not
reporting truthfully , but they didn't react - they made me only do this to harass
me. Then, my mother died fromaheart attack, because she knew that her son
had met with serious torture in interrogation and it was more than she could
Office Ph: 66(0)55-545495
This time there is no need for me to giveadescription or an explanation because the author already put everything inanutshell himself.
(from the back of the hardcover)
No Easy Road: A Burmese Political Prisoner's Storey
chronicles Thiha Yarzar's nearly 18-year journey on the long road to freedom, first asapolitical prisoner jailed and tortured in five differnt Burmese prisons, and then as political exile in Thailand.
I wanted to scream. But I controlled myself. I did not want to show
them my fear or my rage. I swallowed my voice. I did not want them to
to think of me asacoward. - Thiha Yarzar (from the back of the hardcover)
(chapter 12, The Prisoners Dream Comes True, Page 69)
"It was likeadream," he remembers of the night he was driven inataxi to his sisters house.
Was this that old prisoner's dream, and would be returned to prison just before waking up?
He got lost because the city streets and the neighbourhood had changed so much while he was in prison.
Two police cars followed the taxi as he tried to find the house he had spent so much time in asachild.
But he didn't wake up in his cell. Instead, he finally stood at his sister's door.
"She shouted, 'Hey! This is Thiha!' She came running to meet me, crying."
"Mommy is here," she told Thiha.
Thiah stared in amazement as he watched an old woman come out of the house.
"It was my mother. But I didn't recognise her at first," he said.
Daw Tin Lay Myint was now 68 years-old. He remembers her hair had turned white. She was thin, but looked healthy.
"She just stared at me, as she moved slowly toward me," he recalled.
"This is Thiha!" his sister shouted.
"They thought I was dead," Thiha said, ...
(chapter 14, Free Burma!, page 78)
This decision made by Thiha Yarzar, the young history student at Rangoon University, to pursue and defend the cause of democracy in Burma because it is the better way, and his willingness to pay the steep price to secure it, has not waivered despite long years of imprisonment and torture and suffering to him and his family.
"I did my duty and I will continue to do my duty. Every Burmese hasaresponsibility to struggle for democracy and human rights in Burma," he said.
"I'm free, and I'm getting strength from the fact that I'mafree man. I will do whatever I can to continue my fight for democracy and human rights."...
2nd Edition: ExPP-ACT
The Best Friend Library:
Info (by ExPP-ACT):
Can be bought or ordered in Mae Sot only!
‘Exile’ isacollection of nine portraits from the Thai- Burmese border area. Here, thousands of Burmese migrants and refugees livealife in hiding asaconsequence ofacorrupt military regime in their homeland.
The voices of nine different people each tellapersonal story about life in Burma and life in exile. From democratic movements, ethnic minorities to ordinary Burmese people, the portraits uncover the brutality of the Burmese regime, its massive violations of human rights and the trials and tribulations of living asamigrant or refugee in another country.
Written by Anne Marie Thyrup Christiansen and Pernille Houborg.
Copyrights by Christiansen, Houborg, Exppact
Deciphering Myanmar's Peeace Process
A reference guide 2013
This collection of facts about ongoing conflicts in Myanmar, of the various ethnic groups and their political organisations and armed forces, and the level of peace talks etc. is very detailed and informative. There'sadiscourse about the different root causes that lead to those numerous conflicts. Another chapter explaines the Burmese government's idea ofapeace plan on the one hand - and the ethnic minorities ideas about peace on the other hand. One can also findadescription of international assistance, mediation and of the business peace mediators.
And it deliversacomplete overview of ALL ethnic armed groups, including their history, strength, leaders, organisations, developments, offices, contact numbers and adresses, partners, clashes, etc.
Finally, three appendices are included explaining 1.) Ceasefire Terms, 2.)Comparison of agreed terms by the ethnic groups and 3.) Armed Resistance Groups.
This book was delivered atapress meeting at the FCCT in Bangkok on Monday 18th March 2013. It is not available in any bookshops but you can download it for FREE as pdf-file from this web page:
First Editon 2013
PO Box (76) Chiang Mai University PO
Phone: +66 (0) 84 722 5988
Eingestellt von Holger Grafen um 18:52
1:32 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
ထုတ်ဝေခွင့်ရထားတဲ့ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ ၁၆ စောင်ထဲက ပထမ ဆုံး ၄ စောင် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ လက်ရှိသမ္မဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ အရပ်သားတပိုင်း အစိုးရသစ်လက် ထက် ထူးခြားတဲ့ မီဒီယာတိုးတက်မှုဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ နအဖ၊ န၀တနဲ့ မဆလ ခေတ်ကနေ လမ်းခွဲ ထွက်လာတဲ့ လက္ခဏာတခုလို့ ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ စတင် ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ နေ့စဉ်သတင်းစာများ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ (ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ်၊ ရွေနိုင်ငံသစ်၊ စံတော်ချိန်နဲ့ the Voice) သတင်းစာ ၄ စောင် အပါဝင် ဆက်တိုက်ထွက်လာမဲ့ သတင်းစာအားလုံး ဘယ်လောက်အထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးခွင့် ရမလဲ။ ဘယ်လောက်အထိ အဆင့်တန်းမှီမှီ ရေးနိုင်မလဲဆိုတာကို မသိနိုင်သေးပေမဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် သတင်းစာ ၁၆ စောင်တောင် ထုတ်ဝေခွင့် ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းချိန်မှာ မွေးပြီး မဆလ ခေတ်မှာလူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျနော် တို့ မျိုးဆက်အတွက်တော့ တကယ့်ကိုအထူးအဆန်းပါပဲ။
၁၉၆၂ စစ်တပ်က အာဏာမသိမ်းခင် ဖဆပလ ခေတ်မှာတုန်းက မီဒီယာ (အဲဒီခေတ်က စာနယ်ဇင်း လို့ခေါ်) လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပြီး ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ စစ်အစိုးရတက်လာချိန်မှာတော့ အားလုံး ကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းလုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့မျိုးဆက်ဖတ်ဖူးတဲ့ သတင်းစာဆို တာဟာ မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံနဲ့ ဗိုလ်တထောင် ၃ စောင်ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီသတင်းစာ ၃ စောင်မှာ ပါတဲ့သတင်းတွေကလဲ အများပြည်သူနဲ့သိပ်မဆိုင်တဲ့သတင်း။ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရက သူပြောချင်တာ ပြောဖို့၊ အစိုးရကောင်းကြောင်းဝါဒဖြန့်ဖို့ ရေးခွင့်ပေးထားတဲ့ သတင်းစာတွေသာဖြစ်နေတာကို စိတ်မ ကောင်းစွာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ သတင်းစာပညာ Journalism ဆိုတာကို ကျနော်တို့မျိုးဆက် သင်ကြားခွင့်မရခဲ့ပါ။ ဖ ဆပလ ခေတ်နဲ့ မဆလခေတ်အစောပိုင်းအထိ လူထုဆက်သွယ်ရေးဘာသာရပ်ကို တတ္ကသိုလ်နဲ့ ဒေ သကောလိပ်တွေမှာသင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့ ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်ရောက်ချိန်မှာ သတင်းစာ ပညာဘာသာရပ် မရှိတော့ပါ။ ရသစာပေ အသားပေး လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ လုံးချင်းဝတ္ထုစာအုပ် တွေနဲ့သာ ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီလို နှစ် ၅၀ ကျော် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့အခြေနေကနေ အခု ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ ၁၈ စောင်ထွက်လာတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တခါ ကျနော်တို့ကျောင်းသားဘ၀က စိတ်ကူးယဉ်လို့မရခဲ့ တဲ့ Journalism ဘာသာရပ်ကိုလဲ ဗိုလ်တထောင်က အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုကောလိပ်မှာ သင်ကြားပေး နေတာ ၄-၅ နှစ်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။
ပုံနှိပ်မီဒီယာအပြင် အသံလွှင့်မီဒီယာကိုလဲ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးမှာလား
ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ ၁၆ စောင် ဒီနှစ်ထဲ ထွက်လာမှာကတော့ သေချာနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ဟာ အယင်နှစ် ၅၀ ကလို စာ-နယ်-ဇင်း (ပုံနှိပ်မီဒီယာ) ခေတ်သက်သက်မဟုတ်တော့။ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့အညီ အသံလွှင့်မီဒီယာနဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတင်းစာတွေပုဂ္ဂလိက ထုတ်ဝေခွင့်ပေးသလို အသံလွှင့်မီဒီယာတွေကိုလဲ ပုဂ္ဂလိက ထုတ် လွှင့်ခွင့်ပေးမှာလားဆိုတာ ဆက်ဆွေးနွေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ အခြေနေကိုပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင် ၁၉၆၂ မှာ စစ်တပ်က အာဏသိမ်းပြီးတဲ့နောက် မဆလ ခေတ်မှာ လွတ်လပ်တဲ့သတင်းစာတွေ၊ စာ-နယ်-ဇင်း တွေ မရှိတော့တဲ့အတွက် ပြည်သူအများ စုဟာ ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာတွေဖြစ်တဲ့ BBC, VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုတွေကို အားကိုးခဲ့ကြရပါတယ်။ တခါ ၁၉၈၈ မှာ စစ်တပ်က အာဏာထပ်သိမ်းပြီး န၀တ-နအဖ ခေတ်ရောက်တော့ DVB, RFA ရေဒီယို တွေ ထပ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ပြည်တွင်းမှာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နည်းလေ ပြည်ပ က မီဒီယာတွေအပေါ် အများပြည်သူက အားကိုးမှုတိုးလေ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
အခု ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အရပ်သားတပိုင်းအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးနေပါတယ်လို့ ပြောနေသည့်တိုင်၊ ဂျာနယ်တွေ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး ထုတ်ဝေခွင့်ရနေသည့်တိုင်၊ Facebook အပါဝင် ဆိုရှယ် မီဒီယာတွေ၊ အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေ ထွန်းကားနေသည့်တိုင် ကျေးလက်နေ ပြည်သူအများစုကတော့ သ သတင်းမှန်တွေကိုအချိန်မှီရဖို့အတွက် ပြည်ပကလွင့်တဲ့ BBC, VOA, RFA, DVB လှိုင်းတို ရေဒီယိုတွေ ကိုသာ အားထားနေရဆဲလို့သိရပါတယ်။
တခါ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့အညီ ရေဒီယိုအပြင် ရုပ်-သံ လိုင်းတွေပါ ပြည်ပ အသံ လွှင့်ဌာနတွေက အပြိုင်အဆိုင်တိုးချဲ့လာနေပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ DVB က စလောင်း TV စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြိး ထင်ထားတာထက်တောင် ပိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါ တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ VOA နဲ့ RFA ကလဲ စလောင်း TV တွေ စတင် ထုတ်လွှင့်လာခဲ့ ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီနဲ့ မဇျိမကလဲ နေ့စဉ် သတင်းတွေ အပြင် ရုပ်-သံ စတိုရီတွေကို YouTube ကတဆင့် ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်လာတာကို တွေ့လာရပါတယ်။
ဒါက ပြည်ပအခြေနေပါ (အခုတော့ ပြည်ပ မီဒီယာအားလုံးး ပြည်တွင်းမှာရုံးခွဲဖွင့်ခွင့်ရထားပါပြီ)။ ပြည် တွင်းအခြေနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်က တိုက်ရိုက်ပိုင်တဲ့ မြန်မာ့အသံ ရေဒီယို၊ မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ မြ၀တီရေဒီယို၊ မြ၀တီရုပ်-သံတို့အပြင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် Sky-net ဆိုတာ အခု ဦး သိန်းစိန် အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ အတော်ခေတ်စားနေပါပြီ။ ပြီးတော့ Forever အဖွဲ့ကလုပ်တဲ့ MRTV4 ကလဲ အရှိန်ကောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါအပြင် ဖျော်ဖြေရေးကို ဦးစားပေးပြီး မိုးလေ၀ါသနဲ့ ယဉ် ကြောင်းသတင်းတွေကိုကြေညာလေ့ရှိတဲ့ FM ရေဒီယိုတွေလဲ ပြည်နယ်-တိုင်း ၁၄ ခုစလုံးမှာ နားဆင် နိုင်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။
ထူးခြားတာကတော့ အစိုးရပိုင်အသံလွှင့်ဌာနတွေကိုတောင် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်ထိ တော့ သေချာတိကျတဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးထွက်လာတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီလို အ ခြေနေမှာ DVB, VOA, RFA TV နဲ့ BBC ရေဒီယိုတွေ ပြည်တွင်းမှာ လွတ်လပ်စွာလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ကော အသံလွှင့် မီဒီယာ အခြေနေက ဒီထက်မက ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမလား။
ဒီနေ့ခေတ်လောက် မီဒီယာအရေအတွက်များတာ တခါမှမရှိသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အခု ထွက်လာမဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းစာက ၁၆ စောင်၊ ဂျာနယ်ပေါင်းက တရက်ကိုအနဲဆုံး ၅ စောင်လောက်ထွက်နေတဲ့ အတွက် အနဲဆုံးစောင်ရေ ၃၅ စောင်၊ မဂ္ဂဇင်းကလဲ ၃၀ ၀န်းကျင်ဆိုတော့ ပုံနှိပ်မီဒီယာ အရေတွက် က အတော်များနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေအားလုံးက အများပြည်သူ လို ချင်တဲ့ သတင်းအချက်လက်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေပေးနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကတော့ မေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တခါ သတင်းစာ ၁၆ စောင်စလုံးဟာ ရန်ကုန်မှာပဲထုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီး နယ်မြို့တွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ သတင်းစာ မတွေ့မိသေးပါ။ နောက်တချက်တော့ အခုသတင်းစာ ၁၆ စောင်ဟာ နိုင်ငံတကာရှိ သတင်း စာတိုက်တွေလို ၀ဘ်ဆိုက်ရှိမရှိ၊ သတင်းတွေကို စာနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲပြီးဖေါ်ပြတာအပြင် ဗွီဒီယို ကလင့် တွေ၊ အရေးပေါ်သတင်းတွေကို မီနစ်ပိုင်းအလိုက်အချိန်မှီ တင်ပြနိုင်ဖို့ရှိ မရှိ မသေချာသေးပါ။ နောက် ထပ်အရေးကြီးတဲ့တချက်ကတော့ သတင်းစာ ၁၆ စောင်စလုံးဟာ မြန်မာဘာသာနဲ့ထုတ်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်တဲ့သတင်းစာမျိုး လိုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက် အသံလွှင့်မီဒီယာတွေဖက်ကိုလှည့်မယ်ဆိုရင် အစိုးရပိုင်၊ စစ်တပ်ပိုင် ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား လိုင်း ၂ ခု။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် Sky-net နဲ့ MRTV4။ ပြီးတော့ ပြည်ပနေ၀င်လာတဲ့ DVB, VOA, RFA TV နဲ့ BBC ရေဒီယိုတွေ။ ဧရာဝတီနဲ့ မဇျိမလို အွန်လိုင်းသတင်းစာတွေ (မဇျိမက နေ့စဉ်သတင်းစာထုတ်မယ် လို့ ကြေငြာထားပါတယ်)၊ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် အသံလွှင့်မီဒီယာနဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာအရေတွက်က လဲ သိပ်မနဲလှ။
ဒါပေမဲ့ အများပြည်သူလိုချင်တဲ့ သတင်းအချက်လက်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေပေးနိုင်ရဲ့လားဆိုတာက တော့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းအဖြစ်ရှိနေဆဲပါ။ အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ ကာလအ တွင်း စစ်အစိုးရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ ပြည်ပအခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ မီဒီယာတွေ ဟာ အခုချိန်မှာတော့ ပြည်တွင်း ပြန်ဝင်ခွင့်ရရေးအတွက် အစိုးရကို သိပ်မဝေဖန်တော့ဘူးလို့ဝေဖန်ခံ နေရပါတယ်။ ပြည်ပအစြေခိုက် မီဒီယာတခုဆိုရင် လက်ရှိအစိုးရကို မဝေဖန်တဲ့အပြင် အစိုးရရဲ့ဝါဒ ဖြန့်ချီရေးသတင်းတွေကိုတောင် တဆင့်ခံပြန်လွှင့်ပေးနေရတဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာန လက်ဝေခံသဘောမျိုး တောင် ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်သံတွေကြားနေရပါတယ်။
ဆိုတော့ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အသံကျယ်စွာတောင်းဆိုနေတဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ မီဒီယာသမားတဦးချင်းစီမှာကော သတင်းသမားတဦးရဲ့ ဘက်မလိုက်တဲ့၊ သမာသမတ်ရှိတဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေ၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အရည်သွေးတွေ စံချိန်မှီ ပြည့်ဝနေပါရဲ့လား။ အစိုးရနဲ့ အာဏာ ပိုင်တွေ၊ လွှတ်တော်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေ၊ တပ်မတော်နဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ အပါဝင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီး ၃ ခုကို ဘက်မလိုက်ပဲ၊ မကြောက်-မဖားပဲ တာဝန်သိစွာဝေဖန်ရဲတဲ့သတ္တိရှိကြပါရဲ့လား။ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာလောက၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ မီဒီ ယာလောက ၀န်ထမ်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ကျနော်တို့ မီဒီယာသမားတွေရဲ့အနေထားက ဘယ်အဆင့် လောက်မှာ ရှိနေသလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
အနှစ်ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ တဖက်မှာ မီဒီယာအခင်းအကျင်းနဲ့ထုတ်ဝေခွင့်အရေတွက် တိုးတက်လာ အောင်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သလို အခြားတဖက်မှာလဲ မီဒီယာ ပိုင်ရှင်တွေ၊ ညွန်မှုးတွေ၊ အယ်ဒီတာ တွေ၊ သတင်းထောက်တွေ၊ ကင်မရာမင်းတွေ၊ စက်ဆရာတွေ၊ ၀ဘ်မာစတာတွေ၊ စာပြင်ဆရာတွေ၊ စ သဖြင့် ထောင်၊ သောင်းချီရှိနေတဲ့ မီဒီယာဝန်ထမ်း တဦးချင်းရဲ့ အရည်ချင်းတွေလဲ တပြိုင်းတည်း တိုး တက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
မီဒီယာ ၀န်ထမ်းဆိုတာဟာ စားဝတ်နေရေးအတွက် လစာရရုံ တာဝန်ကျေလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုး မဟုတ်။ မီဒီယာသမားပီသစွာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ရဲ့တာဝန်ကို ယုံယုံကြည်ကြည် ကျင့်ကြံဆောင်ရွက်ဖို့၊ အမှန်ကို ရဲဝံ့ စွာထောက်ပြဝေဖန်ဖို့အရေးဟာ ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက် မီဒီယာသမားတွေထမ်းရွက်ရရဲ့ အဓိက တာ ၀န်ပဲ မဟုတ်ပါလား။ ။